विद्युतीय दुर्घटना, सावधानी तथा सुरक्षाका उपायहरू | Investopaper
विद्युतीय दुर्घटना, सावधानी तथा सुरक्षाका उपायहरू
— ई. खिलनाथ अर्याल
विद्युतीय सुरक्षा – परिचय
हाम्रो दैनिक जीवनमा विद्युतले निर्वाह गरेकाे याेगदान र भूमिकालाई क्षणभरकाे लागि पनि त्याग्न सक्ने अवस्था छैन । जति संसारभर भाैतिक सुख सुविधा र नयाँ नयाँ आविष्कार भैरहेकाछन बिजुलीकाे माग र अपरिहार्यता पनि दिनानुदिन बढेकाे छ ।
विद्युतकाे उपयाेगिता र अपरिहार्यताकासाथ जाेखिम पनि बढी नै छ । यदि सावधानी र सुरक्षा अपनाउनमा थाेरै मात्र कमजाेरी हुन गएमा क्षणभरमै अमूल्य जीवन नाश हुनसक्छ, अपार धनजनकाे विनाश हुनसक्छ । तसर्थ कदम कदममा हाेशियारीपूर्बक कार्य गर्नु, सुरक्षा नियमनहरू पालना गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
यदी विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिनकाे लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने सावधानी अपनाउने हाे भने जनधनकाे क्षती हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
 विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिने
 जनधनको क्षती
दुर्घटनाका मुख्य कारणहरु :-
 विद्युत चोरी :- थाेरै मात्र पैसा बचाउने लाेभमा वा अरूले गरेकाे देखेर हुकिंग गरि विद्युत चाेरी गर्ने क्रममा अकल्पनिय दुर्घटना हुन जान्छ ।
 सुरक्षा उपकरण प्रयोग नहुनु :- विजुलिकाे काम गर्दा हाेस वा घरायसी कार्यकाे लागि विद्युत प्रयाेग गर्दा, सुरक्षा उपकरणहरूकाे प्रयाेग गर्नु नितान्त आवश्यक पर्छ तर अप्राप्यता वा अज्ञानताबश सुरक्षा उपकरणहरूकाे यथाेचित प्रयाेग हुन सकिरहेकाे छैन ।
 जनचेतनाको कमी :- विजुलीलाइ सर्वसाधारणले सामान्यरूपमा हेर्ने चलन छ । विद्युत प्रवाह र यसले पुर्याउने असरका बारेमा यथेष्ट चेतनाकाे कमि देखिन्छ । कतै तारमा लुगा अादि सुकाउने त कतै रूखले छुनेगरि तार लगिएकाे देख्न सकिन्छ, जुन अत्यन्त घातक हुनसक्छ ।
 दक्ष जनशक्तिको प्रयोग नहुनु :- दक्ष जनशक्तिकाे अभाव वा प्रयाेग गर्न नसक्नु पनि दुर्घटनाकाे एक प्रमुख कारण हाे ।
बच्ने उपायहरु :-
 सुरक्षा उपकरणको प्रयोग
 जनचेतना बढाउने
 दक्ष जनशक्तीको मात्र प्रयोग
 Use of Safety Equipment (MCB/MCCB)
 गुणस्तरिय विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग
 सर्भिस तारमा कपडा सुकाउने कार्य नगरौं ।
 विद्युुतीय उपकरणहरुको अर्थिङ्ग गराैं ।
 विद्युुतीय उपकरणहरु चालु अवस्थामा छोडी अन्य कार्यहरुमा व्यस्त नहोऔं ।
 घरको वाइरिङ्ग गर्दा गुणस्तरीय वाइरिङ्ग तारकाे प्रयाेग गराैं ।  अन्य सामाग्रीहरूकाे गुणस्तर र क्षमता राम्ररी वुझेर मात्र प्रयोग गराैं ।
 नाङ्गो खुट्टा र चिसो हातले विद्युुतीय उपकरणहरु नछोऔं ।
 विद्युुतीय पोल, स्टे आदी संरचना नछोऔं ।
 मोवाइल फोन चार्ज गरी रातभरी नछोडौं ।
विद्युत प्राधिकरणले चालेका कदमहरुः
 दुर्घटना सम्बन्धी जनचेतना लाई स्थानिय रुपमा तिव्र प्रचार प्रसार गरी वार्षिक रुपमा विद्युत सूरक्षा दिवस मनाउने गरेको ।
 विद्युत चोरी नगरौ, दुर्घटना बाट बचौं भन्ने अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा अगाडी बढाएको ।
 प्रत्येक केन्द्रमा Health and Safety Inspector को व्यवस्था गरी काममा खटिने कर्मचारीलाई सूरक्षा उपकरण अनिवार्य गराईनुका साथै Safety First को अवधारणा लागु गरिएको छ ।
 विद्युतीय संरचनाहरुको स्तरोन्नती गरेको साथै वितरण प्रणाली अण्डरग्राउण्डीङ्ग कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
 हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रत्येक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सूरक्षा सपथ लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालका प्रमुख विद्युत केन्द्रहरूमा भएका दुर्घटनाकाे स्थितिः
२०६८ असाढ देखि २०७५ चैत्र सम्मको विद्युतिय दुर्घटनाको स्थिति
( विद्युत प्राधिकरणका ई. खिलनाथ अर्यालले विद्युतीय सावधानीकाे विषयमा दिएकाे तालीम नाेटकाे आधारमा )
← म्याग्नेटीक हिल : यस्तो पहाड जहाँ गाडी चलाउनु पर्दैन आफै चल्छ
फेसबुकमा नयाँ सुविधा थपः फाेटाे गुगलमा सार्न सकिने →